ကတိ အတိုင်း ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီး တင်ပေးလိုက်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း ၏ အကျိုး ကျေးဇူး ၈ ချက် – Let Pan Daily
Let Pan | January 28, 2021 | Knowledge | No Comments
ဒီနေ့ ၂၇/၁/၂၀၂၁ မှာကာကွယ်ဆေး စတင် ထိုးနှံပါပြီ တိုင်း/ပြည်နယ် အနှံ့ ကျန်းမာ ရေးဝန်ထမ်းလူဦးရေစုစုပေါင်း ၃ သောင်းကျော်ကို ထိုးနှံပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ ဂုဏ်ယူစရာကောင်းလွန်းပါတယ် ဘယ်သူတွေရဲ့စွမ်းဆောင်မှုလဲဆိုတော့ အ စိုးရ ပြည်သူလူထုအားလုံးစည်းလုံညီညွတ် မှုရဲ့ပြယုဒ်ဖြစ်ပါတယ်
နောက်နေ့တွေမှာ ကာကွယ်ဆေးကို တနိုင်ငံလုံးရှိ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဆက်ထိုးသွားပါမယ်၂၉ နဲ့ ၃၀ မှာတော့ ပြည်ထောင် စုလွှတ်တော် အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များကို ထိုးနှံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
နောက်လ ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်နေ့ကစပြီး ပြည်သူတွေကို ထိုးနှံပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ပြည်ထောင်စုအဆင့် တိုင်း/ပြည်နယ်အဆင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ အတူထိုးနှံကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူတွေထဲကဆို ဘယ်သူတွေကိုဦး စားပေးမလဲ ဒါကတော့ No doubt သံသယဖြစ်စရာမလိုတဲ့ အသက်ကြီးတဲ့ မိဘပြည်သူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာနိုင်ငံတိုင်းမှာကျန်း မာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့နဲ့အတူ
တတန်းတစားထဲ ဦးစားပေးစာရင်းထဲ အမြဲပါသင့်တဲ့လူအုပ်စုဖြစ်ပါတယ် ဒီအုပ်စုသည် ရောဂါဖြစ်ပွား ကူးစက်လွယ်ပြီး ဖြစ်ပွားလျှင်သေဆုံးမှု များပါတယ်
၇၅ နှစ်အထက်ဆို ၅ ယောက်ဖြစ်လျှင် တစ်ယောက်သေဆုံးနိုင်ပါတယ် ၆၁-၇၅ အသက်အရွယ်ဖြစ်လျှင် ဆယ်ယောက် လျှင် တစ်ယောက်သေဆုံးနိုင်ပါတယ်
ဒါဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ အသက် ၆၅ နှစ်အထက် ဘယ်လောက်ရှိနေသလဲ လူဦးရေနဲ့သန်းခေါင်စာရင်းဌာနက တာဝန်ရှိသူကို မေးမြန်းချက်အရ ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာလကုန်အထိ
အသက် ၆၅ နှစ်အထက်က ၃.၆ သန်းကျော်ရှိပါတယ် ဒါဆို ၆၀ အထက်ကရောဆိုတော့ ၅.၆၅ သန်းရှိပါတယ် ၁၈ နှစ်အောက်က ၁၇.၈၅ သန်းရှိပါတယ်
ဒါဆိုကာကွယ်ဆေးရရှိနိုင်မှုအခြေအနေကရော …COVAX ကနေ လူဦးရေရဲ့ ၂၀% ကို ၂၀၂၁ အတွင်းရနိုင်ပါတယ် ဧပြီလ ၇ ရက် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးနေ့မတိုင်ခင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကို ပေးပို့မှာဖြစ်ပါတယ်
ရက် ၁၀၀ စီမံချက်အရ ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ် ဒါဆို ဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာကတော့ ရှင်းမှာပါ မတ်လကုန် ဧပြီလဆန်းမှာရမယ် ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာတော့ သေချာမသိသေးပေမဲ့ ကာကွယ်ဆေးရရှိမှုအပေါ်မူတည်ပြီး
အချိုးကျရမှာဖြစ်ပါတယ် ၂၀% ကိုတော့ တခါတည်းရမှာ မဟုတ်ပါဘူး အသုတ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် လက်ရှိ COVAX က ကာကွယ်ဆေး သန်း ၃,၀၀၀ (၃ ဘီလီယံ) ကို ရရှိဖို့ရည်မှန်းထားတာမှာ သန်း ၂,၀၀၀ (၂ ဘီလီယံ) ရရှိပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် အတော့်ကို အခြေအနေကောင်းနေပါပြီ
COVAX မှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၁၉၀ ရှိတဲ့အနက် မြန်မာနိုင်ငံက ဖွံ့ဖြိုးမှုအလယ်အလတ်နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုလိုအပ်တဲ့တိုင်းပြည် ၉၂ နိုင်ငံထဲပါဝင်ပါတယ် လက်ရှိအနေနဲ့ COVAX က တိုင်းပြည် ၄၆ နိုင်ငံကို
Pfizer ကာကွယ်ဆေးတွေ ဖြန့်ဖြူးနေပါပြီ ဒီထဲမှာ ဖွံ့ဖြိုးပြီးတိုင်းပြည် ၃၆ နဲ့ ဖွံဖြိုးမှုအလယ်အလတ်ရှိတဲ့တိုင်းပြည် ၆ နိုင်ငံပါဝင်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်း မတ်လအတွင်း ရောက်ဖို့ရှိပါတယ်
လက်ရှိ WHO က အသိအမှတ်ပြု Pre qualified vaccine မရှိသေး ပေမဲ့ ဒီလိုမျိုး နိုင်ငံအချင်းချင်း သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ဖို့ WHO အနေနဲ့ လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကို စစ်ဆေးပြီးနောက်
အရေးပေါ်အသုံးပြုမယ့်ကာကွယ်ဆေး Emergency Use List (EUL) ထဲမှာ ထည့်သွင်းပါတယ် လက်ရှိအချိန်အထိကတော့ Pfizer/BioNTech ကာကွယ်ဆေးတစ်ခုသာ EUL ထဲမှာရောက်နေပေမယ့်
နောက်ထပ် Moderna နဲ့ Oxford/AstraZeneca ကာကွယ်ဆေးကိုလည်း EUL ထဲမှာထည့်သွင်းနိုင်ဖို့ အချက်အလက်များ တောင်းခံထားပါတယ် မကြာခင်ပါဝင်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ် ဒီလို EUL ထဲပါမှ COVAX က နိုင်ငံတွေကို ပေးပို့တဲ့စာရင်းထဲ ပါဝင်မှာပါ
ပြီးတော့ အိန္ဒိယကနေ Covishield ကာကွယ်ဆေး လူဦးရေ ၁၅ သန်းစာ (ကာကွယ်ဆေးအလုံး သန်း ၃၀) ဝယ်ယူထားဖို့ ကုန်အမှာစာကို Jan ၅ ရက်နေ့က ပေးပို့ထားပြီးဖြစ်ပါတယ် အမှာအတွက် ပေးရမယ့်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ
၇၅ သန်းကို Jan 14 ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပေးချေရမယ်ဆိုတော့ ခုလောက်ဆို ပေးချေပြီး ဖြစ်လောက်ပါပြီ ကျန်တဲ့တစ်ဝက် ဒေါ်လာ ၇၅ သန်းကို ကာကွယ်ဆေးအလုံးရေ ၁၀ သန်းရောက်ပြီးတဲ့နောက် အနီးဆုံးဖွင့်ရက်မှာ ပေးချေရမယ်လို့သိရပါတယ် ရှေ့လဖေဖော်ဝါရီ ပထမအပတ်မှာလဲ ဆေး ၂ သန်းထပ်မံရောက်ရှိပါအုံးမယ်
မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ ၂၀၂၀ အရ စုစုပေါင်းလူဦးရေ ၅၄.၉ သန်းရှိပါတယ် ဒါဟာ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအပေါ် အခြေပြုပြီး projection အရ တွက်ချက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ဒါဟာပြည်တွင်းမှာနေသူတွေသာပါဝင်ပြီး ပြည်ပရောက်နေသူ
၄.၂၅ သန်း ရှိပါတယ် ဒီလူတွေထဲက ၇၀% သည်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်နေပြီး ၁၅% သည် မလေးရှားနှင့် ကျန် ၁၅% သည် အခြားနိုင်ငံများတွင် ရောက်ရှိနေသော မြန်မာလူမျိုးများပါဝင်ပါသည် သို့ဖြစ်ပါ၍ ဝယ်ယူထားသော ၁၅ သန်းသည် လူဦးရေ၏ ၂၆% နီးပါးရှိပါသည်
ထို့ပြင် အိန္ဒိယက အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချင်းချင်း ချစ်ကြည်မှု၏ ပြယုဒ်အဖြစ် ပေးအပ်ထားသော ကာကွယ်ဆေး ၁.၅ သန်း (လူဦးရေ ၇.၅ သိန်းစာ) Covishield ကာကွယ်ဆေးကလည်း ၂၂/၁/၂၀၂၁ နေ့တွင် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး
ယနေ့တွင်ပင် စတင်ထိုးနှံနေပြီ ဖြစ်ပါသည် နောက်ထပ်လည်း လက်ဆောင်ဒုတိယအသုတ် ၁ သန်း လာဖွယ်ရှိပါသည် တရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. ဝမ်ယိလာရောက်စဉ်ကလည်း ကာကွယ်ဆေးအလုံးရေ ၃ သိန်းလှူဒါန်းမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်
ဒါဆိုရင် ၂၀၂၁ အတွင်း ကာကွယ်ဆေးရရှိနိုင်မှုသည် ၄၆% အထက် ရရှိနိုင်ဖွယ် ရှိပြီး ယခုထက် ပိုမို၍လည်း ရရှိနိုင်ဖွယ်ရှိပါသည် လက်ရှိတွင်လည်း ကာကွယ်ဆေးအတွက် အလှူငွေ
ကောက်ခံရာတွင်လည်း နိုင်ငံတော်မှ မတည်ငွေ တစ်ဘီလီယံကျပ်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံသားများမှ ထည့်ဝင်ငွေ ၁၉ ဘီလီယံနီးပါးဖြစ်သည့်အတွက် ဘီလီယံ ၂၀ နီးပါး ရှိနေပါပြီ အမေရိကန်ဒေါ်လာ မတည်ငွေ သန်း ၂၅၀ ထည့်ဝင်ငွေ ၃ သန်းနီးပါးဖြစ်သည့်အတွက် ၂၅၃ သန်း ဖြစ်သည်ကိုလည်း
၂၁/၁/၂၀၂၁ နေ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံမိန့်ခွန်းအရ ကြားသိရသည်မှာလည်း များစွာနှစ်ထောင်းအားရရှိလှပါသည် ပြည်သူတို့၏ သဒ္ဓါတရားထက်သန်မှုကလည်း တကယ့်ကို အံ့ချီးလောက်စရာဖြစ်ပါသည်
ဒါဆို ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကို ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရန် လူဦးရေဘယ်လောက်ထိ ကာကွယ်ဆေးထိုးရမလဲ? ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူဖို့ ထည့်ဝင်ဖို့လိုပါသေးသလား?
ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေကြည့်ရမယ်ဆိုလျှင် များလေကောင်းလေပါပဲ ဘာလို့ဒီလိုပြောရလဲဆိုရင် ကာကွယ်ဆေးသည် ပိုက်ဆံရှိတိုင်းလည်း ဝယ်ဖို့မလွယ်ပါ ဝယ်လိုအားကများနေပြီး ရောင်းလိုအားက
အကန့်အသတ်ရှိနေပါသည် နောက်ပြီးကာကွယ်ဆေး အမျိုးအစားအလိုက် ဈေးနှုန်းအမျိုးမျိုးရှိပါသည် ကာကွယ်ဆေးရရှိရုံနဲ့လည်း ထိုးနှံသည့်အဆင့်ရောက်ဖို့ operational cost များရှိပါသေးသည်
နောက်ပြီး လူအုပ်စုအားလုံးကိုကာကွယ်ဖို့ အစုလိုက်ကာကွယ်နိုင်မှု Herd immunity နှင့် ပတ်သက်၍ WHO science in5episode #1, 28th August တွင် ပြောပြချက်အရ နိုင်ငံလူဦးရေ၏
၆၀-၇၀% ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန်လိုအပ်သည်ဟု WHO မှ Chief Scientist Dr. Soumya က ပြောကြားခဲ့ပါသည် သို့ရာတွင် အဆိုပါ အချက်သည် ခြုံငုံ၍ ပြောခြင်းဖြစ်ပြီး တိုင်းပြည်တခုချင်းစီ၏ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှင့် Basic Reproduction Number R0 ပေါ်တွင် မူတည်၍ တွက်ချက်ရပါသည်
မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့၏ ဒေတာများအရ R0 သည် ၂.၁၂ ရှိနေသဖြင့် ပုံသေနည်းအရ တွက်ချက်ကြည့်လျှင် herd immunity ရဖို့ ၅၅% အနည်းဆုံးကာကွယ်ဆေးထိုးပေးရန် လိုအပ်ပါသည် အဆိုပါအချက်သည် တွက်ချက်သည့်ကိန်းဂဏန်းသာဖြစ်၍ အခြားသော အကြောင်းခြင်းရာများစွာကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်ပါသည်
လက်ရှိအချိန်တွင် အာဆီယံနိုင်ငံများကို ကြည့်မည်ဆိုပါကလည်း စင်ကာပူနိုင်ငံ တွင် Pfizer vaccine ကို Jan ၈ ရက်နေ့တွင် အစောဆုံး ထိုးနှံနိုင်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်
ထို့နောက်တွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက China Sinovac ကာကွယ်ဆေးကို Jan ၁၃ ရက်နေ့ကစတင်နိုင်ခဲ့ပါသည် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် Oxford ကာကွယ်ဆေးနှင့် အလားသဏ္ဍန်တူ အာနိသင်တူ India နိုင်ငံထုတ် Covishield ကာကွယ်ဆေးကို Jan ၂၇ တွင် ထိုးနှံနိုင်ခွင့်ရရှိသည်မှာ အထူးပင် ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာဖြစ်ပါသည်
ကာကွယ်ဆေးနှင့် ပတ်သက်၍လည်း သိသင့်သိထိုက်သည်များကို MoHS page တွင်ဖော်ပြထားသဖြင့် သေချာစွာဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် ကာကွယ်ဆေးသည် viral vector အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး
စိတ်ချရသောဆေးလည်းဖြစ်ပါသည် အာနိသင်ထိရောက်မှုကို ပြောရလျှင် ၆၂-၉၀% အထိရှိပြီး ပျှမ်းမျှအားဖြင့် ၇၀% ရှိပါသည်
အထူးသဖြင့် အသက်ကြီးသောသူများတွင်ပင် ကာကွယ်ဆေး၏ ကိုယ်ခံအားတက်ရှိမှု ကောင်းမွန်ကြောင်း ကာကွယ်ဆေးစမ်းသပ်သည့် clinical trial တွင်ပါဝင်သောရလဒ်များအရ သွေးထဲတွင် Antibody level နှင့် active T cells တက်ရှိမှုကို
ကောင်းစွာပြသနိုင်ကြောင်း ဆိုထားပါသည် The Lancet journal Jan 8 ရက်နေ့ထုတ်တွင်လည်း UK တွင်လက်ရှိအသုံးပြုနေသော Oxford ကာကွယ်ဆေး၏ အစွမ်းထက်မြက်မှုအပေါ် သုတေသနပြုမှုများဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ပြောထားပါသည်
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင် ယခုမြန်မာနိုင်ငံတွင်ထိုးနေသောကာကွယ်ဆေးသည် UK နိုင်ငံတွင်အသုံးပြုနေသောကာကွယ်ဆေးကို မူပိုင်ခွင့်ရပြီးထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီ ၃၀ ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် Serum institute of India မှ ထုတ်လုပ်သည့် အစွမ်းထက်ကာကွယ်ဆေးဖြစ်သဖြင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန် အကျုံးဝင်သူတိုင်း မပျက်မကွက် ထိုးနှံမှု ခံယူနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်
ကာကွယ်ဆေး၏ အမျိုးအစားများ နှင့် အကျိုးအာနိသင် ၈ ချက်ကို ဒုတိယပိုင်းအဖြစ် ဆက်လက်ရေးသားပါမည်
မြန်မာပြည်သူများအားလုံး စည်းကမ်းတွေလိုက်နာပြီး အမြန်ဆုံး ကိုဗစ်အန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးကြပါစေ
လူတိုင္း သိထားသင့္ သည့္ မိုးရာသီ တြင္ သတိထားရ မည့္ အႏၲရာယ္မ်ား